Akka Rabbii fi Ummata Oromootif malee akka galtuu fi gantuutif .. – Kichuu
Hiriira nagaa Hawaasa Oromoo biyya New Zealand magaala Wellington.
Ani Haceedhaan yoomuu nagayatti hin jedhu.Waan du’e natti fakkaachuu dide.Ati duutus yoomuu hin dagatamtu, Onnee Oromoo miliyoona 60 keessa jirta
Yoo bilisummaan ummata Oromoo argame awwaalichi kee
handhuura Oromiyaa Finfinneetti ni deebi’a.hacee koo abbaa hundaa
Sumeyyaa Lalistuu Intala Walloo
የህወሓት መግለጫ፣ የብልፅግና ቡዱን የአፈና ድራማ በአስቸኳይ እንዲያቆም ህወሓት በመግለጫው አስታወቀ።
Oromoon bakka feetan jirtan, yeroo kanatti #ABO, #OFC, #OMN #WBO fi hidhamtoota Oromoo komachuu fi qeequu irraa of qusadha; safuu Oromummaa horachuun gaarii dha. Kan ajjeese dhiisanii kan ajjeefametti quba qabuun, kan hidhee itti roorrisu dhiisanii kan hidhamee roorifamaa jiru irratti dhagaa guuruun qajeelaa miti. Kannaan ajjeefaman, kanneen hidhaman, kannaeen dararaa keessa jiran haqa Oromoof jedhanii ti; Lubbuun Oromoo kan dhangala’aa jiru bilisummaa Oromoo tiksuuf jedhee ti.
Diinni keenya sirna nafxanyaa ti; mootumama sirna nafxanyaa nurratti haaromsaa jiruu dha. Kana dagachuu hin qabnu.
Yoo dandeessan qabsoo Oromoof dirmadha; dadhabdan diina cina hin dhaababtiinaa!
Booree fi Safuun Oromummaa kana!!
#FreeOromia #FreeOromoPloticalPrisoners #FreeOLFLeaders #FreeOFCLeaders #FreeOMN #FreeOMNJournalist #OromoProtests
Wareegamni keessan gatii guddaa qaba; miliyoonni akka Oromummaa isaaniin boonanii jiraatan godhaa jira.
Maqaaa fi hojiin keessan Galmee Seenaa keessatti barayyuu yaadatama!!
Maatiin Abiyot maal jetti .Afaan amaaraa hin dubbatinaa, afaan qomcee faana tokko laga cehuu hin dandeenye
Dhiiraa waan manaa Ba'eef Beeku Haacee koo Dabalii jiraadhuu- Haaceen keenya hardhas seenaa dalage.
"Beeksisa! Barattoonni Yunivarsiitii Amboo nyaata dhorkamuun Mooraa Gadi Lakkisanii Ba'uu Murteessan!